पशुपतिनाथमा उठेकाे भेटी सामाजिक सेवामा किन प्रयाेग नगर्ने ?
जसरी महिला मार्चमा व्यक्त विचारलाई नबुझी खेदियो, त्यसैगरी असमानता, बालविवाह र कुसंस्कारविरुद्ध लेखिएको लेखलाई एक लाइनको भरमा खेदियो । आक्रोश, कुण्ठा र अराजक कमेन्ट लेख्नेहरूले लेख पढेकै छैनन् । छोरा र छोरीबीच समानता चाहिन्छ, छोरीमाथिको विभेदले देश गरिबीको चपेटामा छ । जसको सिकार अहिलेको पुस्ता मात्र होइन, यसको असर कालान्तरसम्मै रहनेछ । यसलाई बेलैमा सोचौँ भन्नु के नराम्रो हो ? यसलाई पनि विरोध गर्नु भनेको वास्तवमा यो हिन्दु धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको आसुरी प्रवृत्ति हो ।
शिवलिङ्ग के हो ? यो कसरी बन्यो भन्ने छुट्टै बहस होला । पहिला बहस गरौँ महिला र पुरुष बराबर हुन् या होइनन् ? धर्म वर्ण, लिङ्ग, जातका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न पाइन्छ ? अहिलेको बहस यो हो । हिन्दुहरूको आस्था ‘शिवलिङ्ग’का बारेमा लेख्ने तँ को होस् भन्न पनि पाइन्छ ? आलोचना, तर्क, बहस एक सञ्चारकर्मीका लागि प्रेरणा हुन् । ‘शिवलिङ्ग’को सन्दर्भ मात्र लिँदा उठेकाे रिसले अर्कोलाई इसाई वा यसको दलाल देख भनेर कुन ग्रन्थमा लेखिएको छ ?
हिन्दु धर्मको मसिहा, ठेकेदार जसरी प्रस्तुत भएका आदरणीय महानुभावहरू पहिला बुझनुहोस्, म एक हिन्दु हुँ । मलाई मेरो धर्म र आस्थाप्रति गर्व छ । जसरी इसाईको बाइबल, मुस्लिमको कुरान, बौद्धको त्रिपिटक मूलग्रन्थ भएजस्तो हिन्दुको वेद हो भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ । हिन्दु धर्मका यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरी चारवटा वेद छन् । यिनलाई कक्षाको पाठ्यपुस्तकजस्तो गरी होइन, जीवनको आदर्श मानी पढेको व्यक्ति हुँ ।
उपनिषद्, श्रीमद्भागवत् गीता हुँदै अहिले स्कन्द पुराण र मार्कण्ड्य पुराण पढ्दै छु । त्यहाँ लेखिएका समानता र सकारात्मक ऊर्जालाई अनुसरण गरी धर्मको नाममा ग्रन्थमा हुँदै नभएको तर्क सारी समाजमा विभेद खडा गर्ने, पछ्यौटेपनको प्रवर्द्धन गर्ने, महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन बाध्य पार्नेहरूका विरुद्ध आवाज हो मेरो । एक हिन्दु भए पनि ‘शिवलिङ्ग’ प्रति मेरो कुनै पनि आस्था छैन ।
‘यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते ।
रमन्ते तत्र देवता ।।’
अर्थात् जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ भगवान् खुसी हुन्छन् भन्ने आदर्शलाई स्खलित कसले गरिरहेको छ ?
‘दशपुत्रसमाकन्यादशपुत्रान् प्रर्वधयन् ।
यत्फलं लभते मत्र्यस्तल्लभ्यं कन्ययैकया ।।’
एक छोरी दस छोराबराबर हुन्छिन् र एक छोरी हुर्काउँदा दस छोरा हुर्काएबराबर पुण्य मिल्दछ भन्ने स्कन्द पुराणको माहेश्वर खण्डमा लेखिएको यो पाटोलाई सुन्नै नसक्ने को हो ? चारवटा वेद र उपनिषद्‌का कुनै श्लोकमा नभएको कुरालाई कुसंस्कारको रूपमा अवलम्बन गरी महिनावारी भएकी महिलालाई मन्दिरमा जान हुँदैन भन्ने को हो ?
१ असोजमा विश्वकर्मा पूजा गर्ने, उनीहरूले बनाएको भाँडावर्तन, मूर्ति पूजा गर्ने तर उनीहरूलाई नै मन्दिरमा पूजा गर्न रोक्ने को हो ? कथित् माथिल्लो जातले मात्र मन्दिरमा पूजा गर्ने आफ्नो स्वार्थका लागि दलित बनाएर मन्दिरमा जान रोक भनेर वेद र उपनिषद्‌का कुनै श्लोकमा लेखिएको छ ? आफ्नो धर्मको मूलग्रन्थ कहिल्यै पढ्नुभएको छ ?
तिरुपति बालाजी मन्दिरको जस्तो मेरो पशुपतिनाथको पनि मेडिकल कलेज किन हुन सक्दैन ? पशुपतिले डाक्टर जन्माउँदा हिन्दुधर्मको कति प्रवर्द्धन हुन्छ । दीनदुखीहरू पशुपतिको शरणमा पर्ने संस्थागत ट्रस्ट हुँदा आस्था बढ्छ कि घट्छ ?
म मेरो धर्मलाई अराजक, अश्लील, विभेदकारी, असहिष्णु छ भनेर आरोप लगाएको सुन्न सक्दिनँ । यस्तो आरोप लगाउनेलाई चार वेद र उपनिषद् पढेर बहस गर्न आउनुहोस् भन्छु । तर, कतिपयले आलोचकलाई सिधै इसाई भनिदिन्छन् । उनीहरू र मबीच फरक यही हो । हिन्दुको मूलग्रन्थमा नभएको विभेद, हेला, तिरस्कार र अश्लीलता संस्कारका नाममा जबर्जस्त समाजमा बोकाउने को हो ?
‘यद्यदस्चरति श्रेष्ठस्तरत्रेदवेत्तरोजनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।’
यो श्लोक गीताको १६औँ अध्यायमा लेखिएको छ । अर्थात् ठूला मानिसले जे-जस्तो काम गर्छन्, सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्छन् । ठूलो र हिन्दु धर्मका मसिहा भन्नेहरूले महिला, दलित र उत्पीडितहरूलाई गरेको विभेद, तिरस्कार र हेलालाई सामान्य मानिसले पनि अनुसरण गरोस् भन्ने चाहन्छन् या गीतामा कृष्णले यस्तो विभेद गर्नेलाई आसुरी प्रवृत्ति हो, जसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई आदर्श मान्छन् ?
हो, वेद र गीतालाई आदर्श मान्नेले महिलामाथि विभेद गर्दैन । ऋग्वेद (१०.८५.९) मा उल्लेख भएनुसार वैदिककालमा बालविवाह हुँदैनथ्यो । छोरीले विवाह गर्ने चाहना गरेपछि मात्र उनको विवाह हुन्थ्यो । कन्याले आफूले चाहेजस्तो वर रोज्न पाउँथिन्, जसलाई स्वयंवर भनिन्थ्यो ।
ऋग्वेद (५.६१.६)का अनुसार छोरी पनि गुरुकुलमा वा घरमा शिक्षा लिन ब्रम्हचारिणी बन्नुपर्ने र विवाहको समयसम्म उनले मानव संस्कार, असल चरित्र र यज्ञ गर्ने खुबी विकास गरिसक्नुपर्थ्यो ।
कौषीतकउपनिषद् (३.१) मा गर्भमा रहेको बच्चाको हत्यालाई बाबुआमाको हत्यासँग तुलना गरिएको छ । अथर्ववेद (३६.११.२) ले गर्भमा रहेको बच्चाको हत्यालाई सबैभन्दा ठूलो पापको रूपमा निन्दा गरेको छ । याज्ञवल्क्य स्मृति र आयुर्वेदको सुश्रुत स्राेतले गर्भमा रहेको भ्रूणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै गर्भपतनको विपक्षमा सुझाव दिएका छन् । उपनिषद् (वेदको अन्तिम भाग)का अनुसार महिला र पुरुषमा शारीरिक भिन्नता मात्र छ ।
बौद्धिक, आध्यात्मिक तहमा दुवै महिला र पुरुष समान छन् । वेदान्त समानताको सिद्धान्तबाट सुरु हुन्छ र दुवै महिला पुरुषमा आत्मानुभूतिको क्षमता उत्तिकै हुने कुरामा विश्वास गर्दछ । सनातन धर्मको मूल सिद्धान्त नै 'अहिंसा परमो धर्मः' हो । यस अर्थमा महिलाविरुद्धका कुनै पनि हिंसालाई सनातन धर्मले अनुमति दिँदैन । यसमा 'पुष्पेणापि न ताडयेत' अर्थात् महिलाले जस्तै अप्रिय कार्य गरे पनि उनलाई फूलले समेत नहिर्काउनू भनिएको छ ।
गौतम धर्मसूत्र अध्याय ५, श्लोक २१–
‘भोजयेत् पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगर्भिणी ।
मनुस्मृति, अध्याय २, श्लोक १२–
‘यथैवात्मातथापुत्रःपुत्रेण दुहिता समा ।’
अर्थात्, पारिवारिक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार हुनुपर्छ ।
मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ९६–
‘देवदत्तां पतिर्भायां विन्दते नेच्छयात्मनः
तां साध्वीं बिभृयान्नित्यं देवानां प्रियमाचरन् ।।’
अर्थात्, भगवान्‌प्रति भक्ति दर्शाउन श्रीमतीप्रति राम्रो व्यवहार गर्नुपर्दछ र श्रीमती भगवान्‌को वरदान हुन् ।
मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक ३२३–
‘पुरुषणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः ।
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ।।’
अर्थात, महिला बेचबिखनमा संलग्न भएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र यस्तो कार्य गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ ।
वसिष्ठ स्मृति पेज ३३५–
‘स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः ।’
अर्थात्, महिला देवी हुन् र उनलाई सोही स्थान दिनुपर्छ ।
संसारमा बन्धन भनेको कानुन मात्र हो । धर्म त कानुनभन्दा पनि माथि मानिन्छ, र त यसमा आस्था र विश्वास हुन्छ । आस्था र विश्वास हुने चीजले के मन छुनु पर्दैन ? के यसको संस्कारका नाममा आएका विकृति विसंगतिलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन । वेद, उपनिषद्, गीता, केही पुराण र मनुस्मृतिमा भएका राम्रा पक्षलाई समाजमा बुझाएर हिन्दु धर्मलाई उत्कृष्ट बनाउने कि महिलालाई खेलौनाजस्तो गरी अश्लीलता छर्ने, विभेदको खाडल खडा गर्ने स्वस्थानीलाई आदर्श मान्ने ?
समाज सेवा गर्न र जनताको मनमा बस्न इसाईहरूको पैसा चाहिँदैन भन्ने भारतको बालाजी मन्दिर गतिलो उदाहरण हो । तर, हाम्रो देशमा भएको यति ठूलो पशुपतिको संरक्षणमा वा त्यसको ट्रस्टबाट किन मेडिकल कलेज, कलेज, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल सञ्चालन हुन सक्दैन ?
‘शिवलिङ्ग’ पुज्नेहरूलाई ‘भजइना’ छाडा लाग्छ भनेर सोध्दा हिन्दु धर्ममाथि प्रहार भएको ठान्नेहरूलाई मेरो ठाडो चुनौती छ- पहिला गीता पढ्नुहोस । हो, भाषा फरक हुन सक्छ र महिलाले विद्रोहको भाषामा भजइना भनिन् । त्यसैलाई नेपालीमा भन भन्नेहरूले पहिला गीतामा योनीका बारेमा लेखेको पढ्न जरुरी छ ।
‘तानहं द्धिषतः क्रुरान संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासरीष्वेव याेनीषु ।।’
अर्थात् जो इर्ष्यालु र क्रोधी छ, उसलाई भवसागरको योनीबाट जन्मनुपर्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू मानव भए पनि आसुरी हुन्छन् ।
‘आसुरीं याेनीमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ।।’
अर्थात् मानव भएर पनि मानवको व्यवहार गर्न नसक्ने, व्यभिचारी, विभेदकारी, कुसंस्कारी, अपराधीहरू निन्तर आसुरी याेनीबाट जन्मन्छन् र कालान्तरमा तिनीहरू कुकुर, सुँगुर ब्वाँसोको रूपमा जन्म लिन जान्छन् भन्ने कुरा गीतामा उल्लेख छ ।
'जस्तो व्यवहार त्यस्तै योनीबाट जन्महुन्छ' भन्ने गीताको श्लोकमा नै तपाईंलाई विश्वास छैन ? विश्वास हुँदो हो त योनी शब्दलाई छाडा किन मान्नुहुन्थ्यो । जब गीतालाई मान्नुहुन्न भने कसरी तपाईं हिन्दु हो ? कैलाश पर्वतमा शिव र पार्वती यौनक्रीडामा भएको बेला भिक्षुको भेषमा अग्नि पुग्छन् । महादेवले रिसाएर दिएको वीर्य अग्निले खाए भन्ने चैँ के सभ्य हो ? भजइना वा योनी छाडा लाग्नेलाई महादेवको वीर्य अग्निले खाएको कुरा छाडा लाग्दैन ? भजइनाका बारेमा छोराछोरीलाई भन्न सकिँदैन भनेर ट्विटरमा लेख्ने मित्रले महादेवको वीर्य अग्निले खाए र गर्भवती भए भनी छोराछोरीलाई भन्न सक्नुहुन्छ ?
ब्रह्मपुरमा नाङ्गै हिँडेका महादेवलाई देखेर सय ऋृषिपत्नीहरू महादेवको पछि लाग्छन् । ध्यानमा ब्यस्त भएका श्रीमान्‌ले यौन सन्तुष्टि दिन सकेनन्, महादेवको पछि लागौँ भनेर स्वस्थानीमा लेखिएको कुरा छाडा लाग्दैन ? महादेवको ‘लिङ्ग’ ऋषिले श्राप दिएपछि पतन भएर ज्योतिरलिङ्ग बनेको र त्यसले संसार ढाक्न लागेपछि विष्णुले अँगालो हालेर जोगाएको र पूजा गर्न लागिएको विषय के हो ? ‘शिवलिङ्ग’ महादेवको त्यो ‘लिङ्ग’ होइन भने श्रीस्वस्थानी बदल्नुहोस् ।
पुष्पक विमानको मात्र हाेइन, मुण्डक उपनिषद्‌को ३.१.९ मा अणु परमाणुका बारेमा उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षामा विज्ञानमा पढेको अणु र परमाणु हिन्दु धर्मको ग्रन्थमा भेट्दा खुसीका साथै निराशा पनि छ ममा । मेरा अग्रजहरूले कहिल्यै पनि यस्तो सुन्दर पक्ष बुझाउन सकेनन् ।
‘शिवलिङ्ग’काे सन्दर्भ मात्र के आएको थियो, इसाई र यसको दलाल भनेर लेख्नेहरूलाई के थाहा, आज तपाईं त्यसरी लेख्न सक्नुमा पनि कतै इसाईकै लगानी पो छ कि ? म हिन्दु भएका कारण सबै धर्मको सम्मान गर्न सक्छु । चर्च र गिर्जाघरमा उठेको चन्दाले नेपालका ठूला अस्पताल, विद्यालय, बाटो, पुल बनेको भन्ने कुरा तपाईंलाई थाहा छैन र ? पाल्पाको मिसन अस्पताल, गोरखाको आँपटारीमा रहेको अस्पताल, ओखलढुङ्गाको मिसन अस्पताल, अछामको बयलपाटा अस्पताल यस्तै चन्दाबाट बनेका हुन् । त्यति मात्र होइन, सुविधासम्पन्न पाटन अस्पतालसमेत यस्तै चन्दाबाट बनेको हो ।
सबैले गुरुकुलमा पढ्नुपर्छ, शिक्षा समान हो भन्ने हिन्दु धर्मको मूल मर्मलाई बिर्सिएर कथित् माथिल्लो जातले मात्र शिक्षा आर्जन गर्ने विभेदकारी संस्कार विगतमा बसालेका कारण अहिले दलितलगायत उत्पीडितमा शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेन ।
अचम्म लाग्ला, भारतको बालाजी मन्दिरले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन यो कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यसैगरी अपाङ्गहरूको सर्जरी र पुनर्स्थापना केन्द्र पनि सञ्चालनमा छ । २ सय ५० बेड रहेको सो केन्द्रमा पाँचवटा त अप्रेसन कक्ष नै सञ्चालनमा छन् ।
समाजमा निरन्तर विभेदको खाडल सिर्जना गरेपछि इसाईहरू प्रवेश गरे, छात्रवृत्ति दिए, पढाए, दुई छाक खाने बनाए । यसमा पनि तपाईंहरूको विरोध छ ? विरोध किन नहोस्, अपराध गरेको भनी कुष्ठरोगीलाई गाउँनिकाला गर्ने संस्कारलाई तिनै इसाईहरूको चन्दाले उपचार गरेर सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाएको इतिहास टाढा छैन ।
फेरि भन्छु- हिन्दुलाई विरोध र इसाईलाई माथि लैजान यो भनिएको हाेइन । विभेदको सिकार हामी कति हुने ? घरमा छोरा र छोरीबीच, वल्लो र पल्लो घरबीच कति विभेद गर्ने ? कक्षामा सँगै पढ्ने दुई नाबालकले दसैँको टीका कथित् जातका नाममा सँगै लगाउन नपाउने प्रश्न यो हो ?
हिन्दुस्तान अर्थात् भारतमा हिन्दुहरू बहुसंख्यक छन् । भारतको आन्ध्र प्रदेशको त्रिमूलमा तिरुपति बालाजीको मन्दिर छ । एक हाेइन, धेरै मन्दिर छन् । विश्वलाई हिन्दुप्रति आकर्षित गर्ने मन्दिर हो यो । पशुपतिमा जलप लगाएर, आरती गरेर हामी हिन्दु हौँजस्तो गरेर हाेइन, बालाजी मन्दिरको गर्विलो इतिहास छ । यो मन्दिरले ट्रस्ट बनाएर समाज सेवा गरी सिंगो विश्वको ध्यान आफूतिर तानिरहेको छ ।
अचम्म लाग्ला, हिन्दु धर्मको बालाजी मन्दिरले मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउन यो कलेज सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यसैगरी अपाङ्गहरूको सर्जरी र पुनर्स्थापना केन्द्र पनि सञ्चालनमा छ । २ सय ५० बेड रहेको सो केन्द्रमा पाँचवटा त अप्रेसन कक्ष नै सञ्चालनमा छन् ।
आवासीय विद्यालयसमेत सो मन्दिरले सञ्चालन गरेको छ । धार्मिक संस्कारका अलावा आधुनिक शिक्षा दिन सो विद्यालय सञ्चालनमा आएको हो । ३० शिक्षक र ३५ कर्मचारी सो विद्यालयमा कार्यरत छन् । यस्तै, अनाथालय खोली एकसाथ ५ सय बालबालिकालाई संरक्षण गरेको छ त्यो मन्दिरले । विकलाङ्गहरूका लागि विभिन्न व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने पोलियो, कुष्ठरोगीहरूका लागि उपचार, संरक्षित गृहसमेत सो मन्दिरले सञ्चालन गरेको छ ।
नेपालमा जस्तै कुष्ठरोगीलाई धर्मको नाममा तिरस्कार गरेको, नेत्रहीन, श्रवणशत्ति नभएकाहरूलाई समाजमा तिरस्कार गरेका कारण हिन्दु धर्ममाथि खतरा देखी सो मन्दिरले उपचार र सामाजिक पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । स्पाइनल इन्जुरीलाई समेत मध्यनजर राखेर यो मन्दिरले सामाजिक सेवा निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छ । अचम्मलाग्दो पक्ष त जंगल र पहाड नै संरक्षण गरी पानीका मुहान जोगाउने मात्र हाेइन, करोडौँ बिरुवा रोप्ने कार्यसमेत यो मन्दिरले गरिरहेको छ ।
समाज सेवा गर्न र जनताको मनमा बस्न इसाईहरूको पैसा चाहिँदैन भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । तर, हाम्रो देशमा भएको यति ठूलो पशुपतिको संरक्षणमा वा त्यसको ट्रस्टबाट किन मेडिकल कलेज, कलेज, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल सञ्चालन हुन सक्दैन ? नेपाल र भारतको धार्मिक सम्बन्धको सेतुको रूपमा रहेको जानकी मन्दिर र सीतामाताको लगानी किन प्रदेश २ का बालिका र महिलामा हुन सक्दैन ? किन बराहक्षेत्रको भेटी पूर्वको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी हुन सक्दैन ? किन बाराही, विन्ध्यवासिनी, बागेश्वरी मन्दिरको लगानी ती क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायमा लगानी हुन सक्दैन ?
महिलामाथिको विभेद अन्त्य गर्न, समामाजिक न्यायका विषयमा धार्मिक तर्क गरी उत्पीडितहरूको मन छुन र आफ्नो बनाउन कसले रोकेको छ ? खै यो विषयमा सोचेको ? वेद, उपनिषद्, गीता पुराणहरूका बारेमा अध्ययन गर्छु र प्रवर्द्धक बन्छु भन्नेलाई खै प्राेत्साहन ? हेला र तिरस्कार गरिएका बालबालिका, विकलाङ्गहरूको सारथि किन पशुपति हुन सक्दैन ? त्यहाँ त मान्छे मरेपछि पनि जलाउन पैसा चाहिन्छ । अर्थात् भगवान्‌को शरणमा जल्छु भन्नेहरू पनि पैसाको अभावमा बेवारिसे बन्छन् र सपना रोक्का मगरजस्ता नारीहरू नै अगाडि आउनुपर्छ, अनि मात्र ती लास भगवान्‌को शरणमा विलीन हुन पाउँछन् ।
तर धिक्कार छ मेरो ‘पुरुषवाद’लाई, जसले महिला दलित उत्पीडितहरूको विषयलाई कहिल्यै सामाजिक न्याय मान्दैन । धिक्कार तिनीहरूलाई छ, जाे जन्मेको छैटौँ दिन षष्टिका देवी (सरस्वती) ले लेखेको भाग्यमा विश्वास गरी आफ्नो जीवन उज्ज्वल होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, तिनीहरू नै अर्की छोरीमाथि विभेद गर्छन् र धर्मको सहारामा कुरीति, विसंगतिलाई आत्मसात् गर्न बाध्य पार्छन् ।
अघिल्लो लेखमा गरिएको विरोधमा पनि यही पक्ष बढी हावी छ । उनीहरूले बेलैमा बुझून्, वेदमा भनिएको छ- नारीबिना पुरुषको जीवन निरर्थक छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १३, २०७७, १०:१७:००